Isikhenkcezisi sefriji → Impahla yokugcina ebandayo • I-P & M yomluki wekhompyuter
Ibhulukhwe yefriji yemisebenzi ekhethekileyo
Isikhenkcezisi kunye nempahla yevenkile ebandayo enikwe kwivenkile pm.com.pl lukhetho olubanzi lweempahla ezilungele iimeko ezinzima. I-assortment eqinisekisiweyo eyenziwe ngezixhobo ezifanelekileyo yenza ukuba ukusebenza kumaqondo obushushu asezantsi kukhuseleke kwaye kufanelekile mihla le. Ibhulukhwe isikhenkcezisi yenye yezinto ezisisinxibo sobungcali emsebenzini kwiimeko ezinzima zokusebenza.
Kanye ecaleni kweebhatyi kunye izihlangu zesikhenkcezisi lelona candelo libaluleke kakhulu kwizixhobo zomqeshwa. Kwiphepha lethu levenkile, iimpahla ezibandayo zevenkile zihlelwe ngononophelo ukuze kukhangelwe ngokukhawuleza nangokulula.
I-dungarees efakwe i-insured yokuzikhusela engqeleni ukuya kwi -45 ° C
Ibhulukhwe yehashe ziyafumaneka ngobukhulu ukusuka kwi-S ukuya kwi-3XL, kwaye iimodeli zazo jikelele zilungele abasetyhini kunye namadoda. I-Dungarees yingubo yokhetho lokugcina ukufudumala komzimba ngelixa uvumela inkululeko yokuhamba.
Umvelisi unikezele ngemibala eyahlukeneyo (umz.i-navy blue, green, blue) kunye neemodeli ezineepateni ezincinci ngohlobo lwemigca enemibala. Ixabiso elikhuphisanayo sisisombululo esifanelekileyo kubantu abafuna izisombululo zezoqoqosho, kwaye xa uthenga ubuninzi obukhulu, kunokwenzeka ukubonelela ngesaphulelo esongezelelweyo.
I-Hi-Glo 25 ibhulukhwe yeColdstore, ukhuseleko ukuya -64 ° C
Iibhulukhwe zevenkile ebandayo-lukhetho olukhuselekileyo
Ibhulukhwe yamagumbi abandayo kunye neefriji zenziwe ngezinto ezikhethwe ngononophelo ezinje ngomqhaphu okanye ipholiyesta, ukukhusela ekubandeni nkqu ukuya kuma-64 degrees C. Iimodeli ezinikezelweyo zinamaqhosha amahle, iipokotho, izixhaso ezinokuhlengahlengiswa ukuze zikhululeke ngakumbi. Ibhlukhwe ineziqinisekiso zokuhambelana eqinisekisa ukulungelelaniswa kwazo ukuze zisebenze kumaqondo obushushu asezantsi.
Ukongeza, ukuba ufuna ukwenza iimpahla zakho zibe zezakho, unokuyalela ngokulula uluhlu olwahlukeneyo oyimfakamfele ngekhompyutha okanye yoshicilelo screen ngemizobo yakho, igama lenkampani, igama okanye isikhundla. Isisombululo esigqibeleleyo kwabo bafuna ukwenza umfanekiso odibeneyo wokudibana.
Si ipaki yomatshini wakhooku kusenza sikwazi ukulawula ukumakisha kuwo onke amabakala eprojekthi kwaye sisabele kwangoko kwimeko apho kungakho naluphi na uhlengahlengiso. Iqela lethu elinamava liya kunceda ekukhetheni iimveliso kwaye ziya kubonelela ngovavanyo lokumakisha simahla.
Ibhulukhwe yevenkile ebandayo